ဝိသာခါဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျပ် ၉၂ သိန်း‌ကျော် တန်ဖိုးရှိဆေးဝါးများနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ဖောင်ကြီး ဆေးရုံCOVID – 19 ကုသရေးနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်းခြင်း | Visakha Foundation ဝိသာခါဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျပ် ၉၂ သိန်း‌ကျော် တန်ဖိုးရှိဆေးဝါးများနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ဖောင်ကြီး ဆေးရုံCOVID – 19 ကုသရေးနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်းခြင်း – Visakha
why we support visakha
Visakha » သတင်းများ » ဝိသာခါဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျပ် ၉၂ သိန်း‌ကျော် တန်ဖိုးရှိဆေးဝါးများနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ဖောင်ကြီး ဆေးရုံCOVID – 19 ကုသရေးနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်းခြင်း
ဝိသာခါဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျပ် ၉၂ သိန်း‌ကျော် တန်ဖိုးရှိဆေးဝါးများနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ဖောင်ကြီး ဆေးရုံCOVID – 19 ကုသရေးနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်းခြင်း
၂.၁၀.၂၀၂၀ နေ့တွင် ဝိသာခါဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျပ် ၉၂ သိန်း‌ကျော် တန်ဖိုးရှိဆေးဝါးများနှင့်ဆေးပစ္စည်းများအား ဖောင်ကြီး ဆေးရုံCOVID – 19 ကုသရေးနှင့် မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်းခြင်း သိန်း၇၀ ကျော်တန်ဖိုး ဆေးဝါးများကို We Love Yangon မှတဆင့် ဖောင်ကြီး ဆေးရုံCOVID – 19 ကုသရေးသို့လည်း‌ကောင်း ၂၂ သိန်းတန်ဖိုး ရှိဆေးပစ္စည်းများဖြစ်သော ၁/ Infusion Pump (၂) လုံး -တန်ဖိုး ငွေကျပ် -၁၃ သိန်း နှင့် ၂/ Patient Monitor (၁) လုံး – တန်ဖိုး ငွေကျပ် -၉ သိန်းတို့ကို မြောက်ဥက္ကလာပ အထွေထွေ ရောဂါကု ဆေးရုံ ကြီးအတွက် လှူ ဒါန်းရာ ဆေးပညာ ဌာန ပါမောက္ခ ဌာ န မှူး Professor Dr. ဒေါ် သင်းသင်းနွဲ့ မှ လက်ခံ ပြီးဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ဝိသာခါ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း COVID-19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ် ကုသရေးလုပ်ငန်းများ‌ဆောင်ရွက်ရာတွင်အသုံးပြုရန်အတွက် Liquid Oxygen တန် (၂၀) လှူဒါန်းခြင်း
စကားပြောစွမ်းရည် ပြိုင်ပွဲ @ SSC
Recognitions | FAQ | Videos
No.46, Pyay Road,6Miles Khwel,Hlaing Township,
09 44642 8139
Fax : +95 1 526 768
2022 © All Rights Reserved. Visakha Foundation. Powered By Source Code Co., Ltd.